महेन्द्र के सी | TAJBIJ.COM
All posts by महेन्द्र के सी
दशैमा यस्तो छ, पर्वतको विशेष सुरक्षा योजना !
October 6, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ असोज २० । चाडपर्वमा लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विषेश शुरक्षा योजना तयार पारेको छ ।
चाडपर्वमा विभिन्न प्रकृतिका घटना हुन सक्ने भन्दै प्रशासन र प्रहरीले विशेष योजना बनाएको बुधबार जिल्ला प्रशासनका पत्रकारसँग शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले दशै लक्षित आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थापन योजना सार्वजानिक गरेको हो ।
दशैमा हुने घरेली हिंसा तथा घरेलु हिंसा रोकथामको लागि प्रहरीले विशेष योजना बनाएको छ । प्र्रहरीले कर्मचारी थप गरी पैदल गस्ती, मोवाइल गस्ती, रात्री गस्ती, सादापोषाक गस्ती तथा सिसिक्यामेरा मनिटरिङ योजनालाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
दशैको बेलामा घरेलु मदिराको प्रयोग बढी हुने भएकोले त्यसको न्यूनिकरणको लागि आफुहरुले अम्रेला योजना ल्याएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु मरासिनीले जिल्लामा दशैको लागि लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना तयार गरीएको बताए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र शसस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको जानकारी दिए ।
दशैको बेलामा हुने अपराधलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विशेष सुरक्षा योजना तयार पारिएको उनको तर्क छ ।
शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव २०७३।०७४ साउन देखि असोज महिना सम्मको आफ्नो काम विवरण समेत सार्वजानिक गरेको छ । जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेशिनको प्रयोगको व्यवस्था मिलाउनु, हुवासमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्नु, एकीकृत घुम्ती शिविर संचालन, जिल्ला शुरक्षा योजना तयार पार्नु, प्रशासनको नयाँ भवन निर्माण प्रारम्भ गर्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धी मानेको छ ।
प्रशासनले आवको पहिलो दुईमहिनामा ४ सय भन्दा बढी साधरण राहदानी सिफारिस गरेको छ । श्रावण महिनामा २ सय ६८, भाद्रमा १ सय १३ साधरण राहदानी सिफारिस र द्रुतमा श्रावणमा २ सय २० र भाद्रमा २ सय २३ वटा सिफारिस गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी श्रावण महिनामा ३ सय ३२, भाद्रमा ३ सय ७९ वटा नयाँ नागरिकता, बैवाहिक अंगिकृत १,द श्रावणमा २ सय २२, भाद्रमा २ सय ९ वटा वितरण गरेको आफ्नो दुई महिने उपलब्धी विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
आवका पहिलो दुइ महिनामा जिल्ला प्रशासनमा ठाडो उजुरी ३२, दर्ता विवाह २, हातहतियार नविकरण ५५, भएको जनाएको छ । प्रशसन शाखा अन्तरगता नाबालक परिचय पत्र ३२, पेन्सन सिफारिस १ सय ४१, विभिन्न प्रमाणित कागजात १ सय ९५, संस्था दर्ता नविकरणमा ८ दर्ता र १ सय १२ नविकरण। पत्रपत्रिका दर्ता ५ वटा भएको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनीले जिल्लामा २० पटकमा २ सय ७० वटा पसलको अनुगमन गरेको बताए । जसमध्ये २८ वटा पसलललाई कारवाही गरीएको उल्लेख गरे । अबैध रुपमा इसिजि, भिडियो एक्सरे, एक्सरे लगायतका सेवा संचालन गरेका मेडिकलको अनुगमन भएर पनि किन कारवाही हुन सकेन भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले १ महिनाको समय अवधि दिएर सु्धारको लागि मौका दिएको र एक महिना पुग्नाािथ अनुगमन गर्ने र रित पुरा नगरे कारवाही गर्ने बताए ।
स्वास्थ्यसंग सम्बन्धीत संवेशनशिल विषयबस्तु भएका कारण आफुले तत्काल बन्द गर्न नसकेको बताए तर उनले नागरिकको संबेदनशिल स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको कुरालाई भने विर्से । जिल्लामा रहेका मासु, मदिार विक्रिवितरण गर्ने, किराना पसल र औषधी पसलको अनुगमन गरेको उनले बताएता पनि त्यसबाट खासै उपलब्धी भएको भने देखिएन ।
अनुगमन गर्नुभन्दा अगावै सम्बन्धी संस्था वा पसलेलाई सुचना प्रवाह हुने भएकोले अनुगमन प्रभावित नभएको उनले स्वीकार समेत गरे तर कसले र कसरी सूचना लिग हुन्छ भन्ने विषय भने खुलाउन सकेनन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रनाउ शेखर खनालले दशैमा हुने विभिन्न प्रकृतिका घटनाको रोकथामको लागि लक्षित गरी योजना तयार पारेको बताए । जिल्ला अदालत पर्वतले विभिन्न मुद्धामा कसुर फैसला गरी दण्ड सजाय तोकेर पनि फरार रहेका हालसम्म ३८ जना पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको बताउँदै उनले यसलाई निरन्तरता दिने बताए ।
जिल्लामा गाउँघरमा स्थानीयको पहलमा १ हजाभन्दा बढी गाँजाको बोट समेत नष्ट गरेको उनले बताए । चाडपर्वको बेलामा लक्षित गरी प्रहरीले तयार पारेको योजना निकै प्रभावकारी हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।
पातीखोले बाढी पीडितहरुको बिचल्ली : राहतले दियो झनै आहत !
September 23, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ असोज ७ । दुई हप्ता पहिले पातिखोलामा आएको बाढीका कारण घरबारविहिन बनेकाहरुले रातहको नाममा पाँच हजार बाहेक केहि पाउन सकेका छैनन् । बस्ने बास उठ्योलामा आएको, खाने गास बाढीले लुट्यो तर प्रशासनले राहतको नाममा पाँच हजार हातमा थमाएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा ग¥यो । पाँच हजारले न त घरनै बन्न सक्छ न त महिना दिनको लागि पुग्ने रासनको जोहो नै हुन सक्छ । पातिखोलामा आएको बाढीका कारण पीडित बनेका बाजुङ १ का मनबहादुर पौडेल अहिले आफ्नो व्यथा लिएर सदरमुकाममा आएका छन् ।
पातिखोलामा आएको बाढीले उनको खोला किनारमा रहेको धानकुट्ने मिलमात्रै बगाएन उनको उठिबासनै गरायो । मध्यरातमा बाढीले मिल बगायो, विस्तारै पहिराले घर जोखिममा पा-यो । भएको घर पहिरोको जोखिमा परेपछि उनी अहिले गुहार माग्नको लागि सदरमुकाममा धाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका पौडेल आफ्नो विचल्ली हुदाँ पनि पार्टी मुकदर्शक बनेर बसेको प्रति दु:खी छन् ।
आफुले स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग राहत भन्दा पनि पातीखोलामा पक्कीरुपमा बाँध लगाउनको लागि अपिल गरेको बताए । खोलाको किनारमा पलास्टर सहितको बाँध बनाईदिए आफुलाई त्योभन्दा अरु केहि नचाहिने बताउँछन् मनबहादुर ।
देउपुर ९ पातिचौरमा धौलागिरी सावुन उद्योग संचालन गर्दै आइरहेका यामबहादुर चोचाङगीको पनि पीडा उहि छ । २३ लाखमा उद्योग संचालन गर्दै आइरहेका चोचाङगीको सावुन उद्योग मात्र खोलाले लगेन उनको सपना समेत उडायो ।
मध्यरातमा भाँगेर बाँचेका उनी आफु र परिवालाई त बचाए तर आफ्नो गरी खाने उद्योग र बासलाई भने बचाउन सकेनन् । बास र गास दुवै गुमाएका यामबहादुरले राहतको नाममा सरकारबाट पाँच हजार र रेडक्रसबाट पाल पाएको बताए । यता न उताको राहत दिएर राज्यले घाउमा मलम भन्दा पनि जलन पैदा गरेको बताए ।
इन्सोरेन्स गर्ने तयारीमा रहेको उद्योग र घर बगाएपछि सुकुम्मबासीको झै मगर संघको भवनमा बसेका उनी पुनर्बास र गरिखाने माध्यम औलाइदिए आफुलाई त्यहिनै राहत हुने बताउँछन् ।
विदेशी खाडी मुलुकमा कमाएको पैसाले देउपुर सुन्चापमा घडेरी किनेर छाप्रो बनाएर बसेका कालु विक, अन्तरे विक, सुन्दर विकको व्यथा पनि उही छ । बर्षोदेखि खाडी मुलुकमा राप र ताप नभइ कमाएर किनेको घडेरी र घर एकाएक खोलाले बगाउँछ भन्ने थाहा भएको भए आफुहरु बरु गाउँमानै बस्ने बताउँछन् । गत बर्ष देउपुरको मैदान जाने सडकबाट पहिरो खस्दा बचेको घर पातिखोलाले भने बगाइ छाड्यो । खोलाले पातिखोलामा रहेको १ मेघावाटको पातिखोला जलविद्युत आयोजनामा क्षति पु-याएको थियो । त्यस्तै रेन्बो ट्राउट माछा फर्म, केराबारी, सयौ रोपनीमा रहेको धान खेत समेतलाई बगरमा परिणत गरेको थियो ।
दोविल्ला–फलेवास सडकको कालोपत्रेबाट निस्कियो भ्रष्टाचारको गन्ध !
September 22, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी पर्वत २०७३ असोज ६ । पर्वतमा पहिलो पटक कालोपत्रे गरिएको ग्रामिण सडक कालोपत्रे गरेको हप्तादिन हुन नपाउदै विग्रिएको छ । असारदेखि कालोपत्रे गरिएको दोबिल्लादेखि फलेवास जाने सडकखण्डको सिल्मीमा एक साता अघि मात्रै गरिएको कालोपत्र उक्किएको हो ।
ठेकेदारको लापरबाही र सडक विभागको बेवास्ताले सडकको कालोपत्रे उक्किएको भन्ने स्थानीयवासीको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो साता कालोपत्रे गरिएको झण्डै एक सय मिटर सडक विग्रिएपछि पुन कालोपत्रे गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेको छ । स्थानीयले मापदण्ड अनुसारको सामाग्री नराख्दा र सडक विभागका कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलिमतोले कालोपत्रे एक साता पनि नटिकेको आरोप लगाएका छन् ।
‘वर्षाका समयमा खोल्साको बाढीलाई एउटा ह्युमपाइपले धान्दैन, कल्भर्ट हाल्ने सुझाव दिँदा नमान्दा सडकमा थप क्षति भयो,’ स्थानीय यामनारायण श्रेष्ठले भने ।
लामा कन्सट्रक्सन प्रालिले एक हजार छ सय मिटर सडक खण्डको कालोपत्र गर्नेको लागि झण्डै तीन करोडमा जिम्मा लिएको हो । यो सडक खण्डको पिच गर्ने कार्यको शुभारम्भ सांसद विकास लम्सालले गरेका थिए ।
सरकारको नियमअनुसार जुनसकै सडक कालोपत्रे गर्दा न्यूनतम ४४ मिलिमिटर अर्थात झण्डै ४ अम्बल हुनै पर्ने मान्यताका विपरित सडकमा १५ मिलिमिटर पनि मोटाइ नभएको ‘कार्पेट पीच’ गरिने क्रम मौलाएको छ । नियमअनुसार नबिग्रिएका सडकको स्तरोन्नति गर्दा मात्रै कार्पेट पीच गर्नुपर्ने हो । तर, पूर्ण रुपमा नयाँ कालोपत्रे गरिएका सडकमा पनि कार्पेट पीच गरिँदैछ । फाल्ट (स्तरीय) र ४४ मिलिमिटरको पीचका हुनुपर्ने भएता पनि सो भने हुन नसकेका कारण पनि दोविल्ला फलेवास सडकखण्डको अबस्था नाजुक भएको हो । पीचका लागि ल्याइएका रोडा र अलकत्राको गुणस्तरबारे पनि सरोकारवाल निकाय बेखबर छ । साना रोलरले पीच सम्याइँदा पीचको दिगोपन हुन नसकेको हो ।
यता ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरमा बेइमानी नगरेको दाबी गरेको छ । ठेकेदार डिबी तामाङले सडक विभागका कर्मचारीकै निगरानीमा भएको कामलाई दोष दिन नमिल्ने बताए । उनले सबै मापदण्ड पूरा गरेर कालोपत्रे गरिएको तर सडक माथिबाट आएको बाढीले केही असर गरेको बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख राजेश पौडेलले बर्षातको समयमा निर्माण कार्य शुरु भएका कारण केहि ठाउँमा सडक विग्रिएको हुन सक्ने तर सोको बारेमा आफुलाई केही जानकारी नभएको उनको भनाई छ ।
कालोपत्रे उक्किएको ठाउँमा पुनः मर्मत गर्नको लागि निर्देशन दिएको उनले बताए । दोविल्ला–फलेवास सडक कालोपत्रे गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । तीन बर्षसम्ममा फलेवाससम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त दोबिल्ला–फलेबास सडकको निर्माण कार्य २०५१ सालदेखि सुरु भएको थियो । यो जिल्लाको दक्षिण भेगलाई सदरमुकामसँग जोड्ने सडक समेत हो । बर्षायाममा सडकको कालोपत्रे शुरु गरिएका कारण महिनौदेखि उक्त सडकखण्ड रोकिदाँ सर्वसाधरणहरुले समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।
जव पयो राति तब बुढी ताती भनेजस्तै वर्षा शुरुभएसँगै पीचको काम थाल्ने ठेकेदारहरुलाई दोष जति वर्षालाई दिएर कमसल काम गरे भएको छ । सरकारी अनुगमन शून्य भईदिदा ठेकेदार मालामाल बनेका छन् ।
सरकारी अनुगमन शुन्य भईदिदा पनि ठेकेदारलाई गुणस्तरी सडक निर्माण गर्न ध्यान दिनुपरेको छैन । एक वर्ष पहिले निर्माणको सम्झौता गर्ने तर सम्झौतापछि वर्ष दिनभरि हराउने ठकेदार वर्षा लागेपछि काम शुरु गर्ने गर्छन् । दोविल्ला फलेवास सडकखण्डको कालोपत्रे गर्ने बेलामा पनि यही भएको हो । राज्यको ढुकुटीबाट करोडौ लगानीमा भएका निर्माणका कार्यमा कसैको चासो छैन ।
पर्वतमा संविधान दिवस:आधा दर्जन दलले एक-एकजना प्रतिनिधी पठाए !
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ असोज ४ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मुलक भर विशेष कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ । पर्वत सदरमुकाममा विहान प्रभातफेरी सहितको कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ ।
संविधान दिवसको अबसरपारि जिल्लामा प्रभातफेरीको आयोजना गरेता पनि नागरिकको सहभागीता न्यून देखिन्थ्यो । प्रभातफेरि पछि भएको कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरु एकले अर्कोलाई घोचपेच गरे । राष्ट्रिय कार्यक्रममा स्थानीय तहमा मनाउँदा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुलाई सहभागिता नगराई कार्यक्रम चलाउने परिपाटीले निरन्तरता पायो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कल्पना चापागाईले संविधान कार्यान्वयनको लागि सवै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना ६५ बर्षको लामो कालखण्डपछि प्राप्त भएको र संविधानमा नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति गराइएको भन्दै संविधान लागू गराउनको लागि सवै राजनीतिक दलहरु एक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अझै पनि कतिपय ठाउँमा संविधानका अन्तरबस्तुका बारेमा नागरिकलाई सचेत गराउन नसकिएका कारण विवाद र विरोध भएको भन्दै सांसद चापागाईले संविधानको प्रचार प्रसारमा समेत जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
जिल्ला अदालत पर्वतका न्यायधिश मोहनराज भट्टराइले संविधानमा उल्लेखित भएका कुराहरु कार्यान्वयन हुने हो भने देश समृद्ध बन्ने बताए । उनले संविधानमा नागरिकका हक अधिकार र क्षेत्रलाई फराकिलो पारिएको बताए । संविधानमा उल्लेखित हक अधिकार र कानूनन लागु नभए सेतो कागजमा कालो अक्षर मात्र हुने भन्दै कानूनको कार्यान्वयनमा सवै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले नेपाली नागरिकले लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयनको लागि सरकारले दिएको दिशा निर्देशनलाई पालना गर्दै स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित भएका हक, अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकार लागी परेको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण पराजुली र जनमोर्चाका जिल्ला नेता बालकृष्ण पौडेलविच जुहारी नै चल्यो । कार्यक्रममा जनमोर्चाका नेता पौडेलले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना तयार गर्दा तीन शिर्ष दलहरुले मध्यरातमा होटलबाट रक्सीको चुस्कीको भरमा तयार पारेको आरोप लगाए ।
स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना नमिलाइ नागरिकको रायसल्लाह विना नै तयार पारेका भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनले नागरिकको राय विनानै स्थानिय निकायको पुर्नसंरचना गरिएको र साना दलहको सहभागिता बेगर निर्माण गरिएको प्रति आपत्ति जनाए । माओवादी नेता पराजुलीले संघियता विरोधीहरुले स्थानिय संघियताका विषयमा बोल्नु उचित नभएको कडा रुपमा जवाफ दिए । उनले जसले संघियताले देश बर्बाद बनाउँछ भन्छ उहि स्थानीय तहको संरचनामा बोल्छ भन्दै यसमा सवै नागरिकको सहजता अनुरुप तयार पारेको बताए । आयोगले तोकेको गाविस, जनसंख्या र नागरिकको सहजता हुने हिसाबले तयार पारेको बताए ।
नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानपछि जारी भएको संविधानको खुसियालीमा देशभर कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएता पनि नागरिकको लागि भने खासै महत्व देखिएन ।
राष्ट्रिय पर्वका रुपमा संविधान दिवसलाई मनाइएता पनि जिल्लामा भने आयोजकले कसैसँग समन्वय नगरी मनाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरे । अन्य कार्यक्रममा डेढ दर्जन भन्दा बढी सहभागी हुने दलहरु संविधानको दिवसको दिनलाई खासै चाँसो दिन सकेनन् । विशेष दिनमा मुस्किलले आधा दर्जन दलले एक/एक जना प्रतिनिधि पठाए । ‘संविधान त केवल दललाई सत्तामा जानका लागि मात्रै चाहिएको रहेको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । दलित, जनजाति, महिला, शहिद परिवारलाई दिवस मनाउन खबर नगरेकोमा आयोजकको आलोचना भएको छ ।
‘एउटा कोठामा बसेर दिवस मनाउनु ठुलो गल्ती हो’ नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ पर्वतका कार्यबाहक अध्यक्ष राजन गुरुङले भने, ‘आयोजकले जनजातिलाई कार्यक्रममा खबर नगरेकोमा दुःख लागेको छ ।’ उनले कहिल्यैपनि राष्ट्रिय दिवसमा पर्वतमा आयोजकले सबैलाई समेट्न नसकेको बताए ।
यता -यालीपछि शहिद गोबिन्दनाथ शर्माको शालिकमा माल्यार्पण भएपनि कार्यक्रममा शहिद परिवारको नाम समेत उच्चारण गरिएन । ‘संविधान दिवसको अवसरमा कहाँ, कसले कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्ने नै जानकारी नभएको शहिद गोविन्दनाथ शर्माका भाई देव शर्माले बताए ।
‘संविधान जारी भएकोजस्तो महत्वपूर्ण दिनको कार्यक्रममा सहभागी हुने इच्छा थियो तर, कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै पाइएन’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नागरिक संघसंगठनलाई समेत बेवास्ता गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले पर्वत उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघसहितका नागरिक संघसंस्थाको वक्ताको नाम काटेका थिए । कार्यक्रममा अपमानित भएको सम्झेर केही नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए । देशभर संविधान दिवस खुसियालीका रुपमा मनाइरहँदा मधेसी मोर्चाले भने कालो दिनका रुपमा मनाएको छ ।
औषधिमा बिलसहित छुट दिने जिल्लाको एउटै पसल साझा औषधि पसल !
September 17, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी पर्वत २०७३ असोज १ । विरामी भई औषधि किन्न पसलमा जाँदा औषधिको मूल्यमा कहिल्यै छुट नलिने र विना विल औषधि लिने बानी परेका सर्वसाधारणलाई औषधिको मूल्यमा छुट दिने पसल पनि छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । औषधिको विक्रीमा छुट दिने पर्वतमा एक मात्र औषधि पसल साझा औषधि पसल हो । यो औषधि पसल जिल्ला अस्पतालको हाताभित्र छ । यो पसलबाट थोरैमा पनि ५ प्रतिशत छुटमा विल सहित सवैखाले औषधि खरीद गर्न सर्वसाधारणले सक्दछन् ।
सर्वसाधारणले औषधि खरीद गर्दा कति डोज, औषधि उपभोग्य म्याद अवधि, मूल्य, उत्पादक कम्पनि लगायत कुनै पनि कुरामा चासो राख्ने नगर्दा पनि नीजि औषधि पसललेहरुलाई फाइदा लिन प्रोत्साहन मिलेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
जिल्ला अस्पतालका डाक्टर सरोज दाहालले भनेका थिए,‘विरामीहरुले अनावश्यक औषधि झोलाभरि ल्याएका हुन्छन् । मैले फाल्नुपर्छ ।’ पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा र आसपासका पर्वत मेडिकल हल लगायत केही औषधि पसललेहरुले कानून विपरित विरामी चेकजाँच गर्ने, आफूखुशी झोलाभरि औषधि विक्री गर्ने र एक्स रे लगायतका सेवा गर्दै आएको विषय यतिखेर सनसनी बनेको छ । औषधि उत्पादक कम्पनि मध्ये जुन कम्पनिले बढी मुनाफा दिन्छ, सोही औषधि विक्री गर्नमा औषधि विक्रेताले रुचि राख्दै आउने चर्चा छ । अझ जुन औषधिमा बढी मुनाफा मिल्छ , सोही औषधि उत्पादक कम्पनिका औषधि विक्री गर्न औषधि पसलेलेहरुले रुचि राख्दै आएको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य सेवाका नाममा औषधि पसलेले भिडियो एक्स रे, एक्स रे, ईसिजी जस्ता सेवा कानूनी स्वीकृति नै नलिई संचालन समेत गर्दैछन् । औषधि पसललेहरुले गर्दै आएको कानून विपरितको कमाउधन्दा र स्वास्थ्यमाथिको गंम्भीर खेलवाड निरन्तर समाचार बनिरहेको छ । समाचारले सनसनी मच्चाएसँगै सर्वसाधारण स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपरेमा जिल्ला अस्पतालतिर जान थाले । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सर्वसाधारणको संख्या दैनिक वृद्धि भएको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि आवश्यक परेमा मात्र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन सहित सस्तो मूल्यमा साझा औषधि पसलबाट औषधि किन्ने सर्वसाधारणको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि छ ।
साझा औषधि पसल नेपाल सरकारको अर्ध स्वामित्वमा संचालित पसल हो । साझा औषधि पसलले सस्तोमा औषधि विक्री गर्दा खासगरी गरीव र मध्यम बर्गका सर्वसाधारणलाई बढी राहत मिलेको छ । गरिवी तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित साझा पसलले सस्तो र गुणस्तरीय औषधि विक्री गर्दै आएको औषधि पसल संचालक कृष्णराज दाहालको दावी छ । यदि औषधि बढी भएका सहजै फिर्ता समेत गर्न सकिन्छ । पसलले सर्जिकल सामानहरुमा निकै नै कम लाभ राखेर विक्री गर्ने हुँदा नीजि क्लिनिकमा भन्दा सस्तो पर्ने बताइएको छ ।
साझा औषधि पसलले छुटमा औषधि विक्री गर्ने हुँदा नीजि औषधि पसलले विरामीलाई झुक्याएर बढी मूल्यमा विक्री गर्ने सम्भावनालाई कम भएको समेत बताईन्छ । औषधिमा मूल्यदर नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास साझा पसलको छ । साझा पसलले अस्पताललाई भाडा वापत औषधि विक्रीको ३ प्रतिशत बुझाउदै आएको जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शिव पौडेलले बताए । विक्रीको ३ प्रतिशतले सरदर २० हजार पर्न आउने बताईन्छ । कुश्मा बजार क्षेत्रमा ९ सहित जिल्लाभर हालसम्मको रेकर्ड अनुसार करीव दुई दर्जन औषधि पसलहरु रहेको जिल्ला अस्पतालका प्रशासन अधिकृत पोषनाथ शर्माले बताए ।
पर्वतमा एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका बनाउने निर्णय !
September 13, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी/ तजबिज खबर, पर्वत २०७३ भदौ २८ । पर्वतमा एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका बनाईनुपर्ने निर्णय जिल्लाका राजनीतिक दलहरुबाट भएको छ । सात गाउँपालिका बनाउने निर्णय आईतवार राती अवेरसम्म भएको राजनीतिक दलहरुको जिल्ला प्रतिनिधिहरुको छलफलबाट हुन गएको बुझिएको छ । राज्य पुनःर्सरचना आयोगको निर्देशिकामा भने पर्वतलाई ६ वटासम्म गाउँपालिका बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख गरेको संख्यामा भन्दा बढी गाउँपालिकाको संख्या यहाँका राजनीतिक दलहरुले तोकेका हुन् । राजनीतिक दलहरुले गरेको निर्णय स्थानिय प्राविधिक सहयोग समितिलाई बुझाइ सकिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य कृष्ण प्रसाद पराजुलीले तजबिज खवरलाई बताए । समितिले पुनसंरचनाको संख्यालाई थपघट गर्न सक्ने राजनीतिक दलका एक प्रतिनिधिले बताए । आयोगको निर्देशिकामा ८ वटा गाविस बराबर १ गाउपालिका हुने भन्ने छ ।
जिल्लामा तोकिएका गाउँपालिकाहरुमा उत्तरतिरको गाउँपालिका बाँसखर्क, माझफाँट, लेखफाँट, शालिजा, धाइरिङ, नाङलीबाङब, बनौं गाविसलाई जोडेर बनाइएको छ । दोस्रोमा उत्तरपूर्वका गाविसहरु भूकताङले, क्याङ, देउराली, देउपुर, बाजुङ, तिलाहार, चित्रे, राम्जा छन् । तेस्रोमा साविक कुश्मा नगरपालिका र यससँग जोडिनेमा ठुलीपोखरी, खौलालाकुरी, आर्थर छन् । चौथो गाउँपालिका बन्नका लागि कार्कीनेटा, थापाठाना, शंखरपोखरी, मुडिकुवा, खानीगाउँ, देवीस्थान, लिमीठाना, ठानामौला, भँगरा र कुर्घा गाविसका १, २, ३, ४, ५, ६, ९ वडाहरुलाई मिलाइएको छ । पाचौ गाउँपालिका अन्तर्गत पाङराङ, बाच्छा, बर्राचौर, रानीपानी, वहाँकी, उराम, शालिग्राम गाविस समाहित गरिएको छ ।त्यसैगरी छैठौ गाउँपालिका बनाउन टकलाक, त्रिवेणी, बेहुलीबास, सरौखोला, भोर्ले गाविसलाई समायोजन गरेको पाइन्छ । सातौ गाउँपालिकामा कुर्घाका ७, ८ वडाहरु र फलामखानी, लुंखु, पाखापानी, बालाकोट, भोक्सिङ, होश्राङ्दी रहने छन् ।
गाउँपालिकाको भौगोलिक सिमांकन राजनीतिक दलहरुले सात वटा गरेपनि तिनीहरुको नामांकन भने अझै टुंगो लागेको छैन ।राजनीतिक दलहरुको निर्णयलाई जिल्ला विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमा अध्ययन र परामर्शका लागि पठाइएको छ । पहिलो पर्वतमा ४७ गाविस भएपछि ६ वटा गाउपालिका हुने पर्ने थियो । केही राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ र पुरानो बजार केन्द्रको अस्तित्व जोगाउने बहानामा गाउँपालिकाको संख्या वृद्धि गर्नु परेको चर्चा छ ।आयोगले दिएको निर्देशिका विपरित गाउँपालिकाको संख्या बढी तोकेका कारण जिल्ला प्राविधिक समितिलाई मुश्किल पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक समितिका अनुसार दलको निर्णय आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
कानूनको नजरमा कोही तलमाथि हुदैनः प्रनाउ खनाल
September 12, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ भदौ २७ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नवागत प्रहरी नायब उपरीक्षक शेखर खनालले कानूनको नजरमा सवै समान भएको भन्दै कोहि तलमाथि नहुने बताएका छन् ।
प्रनाउ खनालले आईतवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कुस्मामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कानूनको परिधिमा रहेर आफुले काम गर्ने र कानून विपरीत काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको विषयमा आफुले कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउदै प्रहरीलाई शासकको रुपमा नभई सेवकको रुपमा हेर्ने बाताबरण बनाउन आफु सदैव लागि पर्ने बताए ।